Lena Rösell oo shaqada ka fariisatay | Somaliska
Lena Rösell oo muddo dheer ka shaqaynaysay caawinta qaxootiga, qaasatan kuwa Soomaalida ee sharciga loo diiday ayaa isbuucaan shaqada ka fariisanaysa, iyadoo noqonaysa hawlgab. Lena oo ka shaqaysa hay’ada Sociala Missionen ayaa ii sheegtay in qofka badali doona iyada ay shaqada soo gali doonto bisha September oo inta ka horeysa aysan jiri doonin cid caawinaysa qaxootiga.
Lena ayaa ii sheegtay in ay aad uga walwalsan tahay xaalada Soomaalida loo diiday in familkooda lala mideeyo iyo kuwa dhibaatadu ka haysata xaga sharciyada iyo Dublin. Mudadii ay shaqada ku jirtay ayay muhiimad gaar ah siisay sidiii ay u caawin lahayd Soomaalida balse waxay ii sheegtay in qofka badali doona laga yaabo in arimo kale ay muhiimada siiso.
Waxay ii sheegtay in ay ku guulaysatay in ay guul ka gaadho qaar ka mid ah kiisaskii Soomaalida ee ay caawisay balse ay dareemayso walwal maadaama aysan Soomaalidu haysan cid caawinaysa. Waxay ugu dambayn sheegtay in ay ku faraxsantahay in ay shaqada ka fariisato balse ay guul u rajaynayso Soomaalida.
Maxaa ku kalifay inay Somali oo u aragta shaqsiyadeeda, inay tahay kufaar,
inay caawiso?. oo waQtigeeda geliso.
Sxb adigu booskeeda gal sidaas ayaan soo jeeedin lahaa….
July 2, 2015 at 02:48
Cabdi Khaalid waxaa tahay qof jiran oo cuqdad xun kujirto ee kudhimo ciilkaade waxaa hubaa inaadan soomaali eheyn